[တရားဝင်] ကို iOS Device ကိုကိုမှအချက်အလက်များကို Recover - ဘယ်လိုမှလမ်းညွှန်
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာ - iOS ကိုဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူ: မည်သို့ရန်
အပိုင်း 1. တိုက်ရိုက် iOS device ကိုမှဒေတာ Recover
အပိုင်း2ကို iTunes Backup ကိုကိုမှအချက်အလက်များကို Recover
အပိုင်း 3. iCloud Backup ကိုကိုမှအချက်အလက်များကို Recover
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နှင့်အတူအဆင့် 1 Connect ကိုကို iOS Device ကို
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုစတင်ရန်။ သင့်ကွန်ပျူတာသို့, သင့်ရဲ့ iPhone, iPad နဲ့ iPod touch ချိတ်ဆက်ဖို့သင့် iOS device နှင့်တကွကြွလာသောကို USB cable ကိုအသုံးပြုပါ။ "Data Recovery" ကိုနှိပ်ပါနှင့် option ကို "က iOS Device ကိုထံမှ Recover" ကိုရွေးချယ်ပါ။
သိကောင်းစရာများ: dr.fone running မီ, သငျသညျကို iTunes ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ထင်ပါတယ်။ dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုအပြေးလာသောအခါအလိုလျောက်ထပ်တူပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်, iTunes ကိုဖွင့်မရကြဘူး။ ငါသည်သင်တို့ကိုရှေ့မ iTunes ကိုအတွက်အလိုအလျောက်စည်းညှိ disable အကြံပြု: "ကိုအလိုအလျောက်ထပ်တူပြုခြင်းကနေကာကွယ်ဆေး iPod, iPhone, နှင့် iPad" စစျဆေး, iTunes ကို> Preferences ကို> ကိရိယာများကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
အဆင့်2ဒါဟာအပေါ်ပျောက်ဆုံးသွားသောဒေတာများအဘို့အသင့် Device ကိုစကင်ဖတ်
ရိုးရှင်းစွာအဤအစီအစဉ်ကိုဖျက်ပြီးသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရဒေတာအတွက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်သင့် iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch scan ပါစေရန် "Start ကို Scan ကို" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အဆိုပါစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ဆဖြစ်စဉ်ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုဒေတာပမာဏပေါ် မူတည်. မိနစ်အနည်းငယ်ကြာရှည်စေနိုင်သည်။ သင်ရှာနေဒေတာရှိကွောငျးကိုမြင်ရလျှင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်အတွင်း, ထို့နောက်သင်ဖြစ်စဉ်ကိုရပ်တန့်ရန် "ဆိုင်းငံ့" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနိုင်ပါတယ်။
အဆင့်3ကို Preview အဆိုပါ Scan ဒေတာများ
အဆိုပါစကင်အချို့ကိုသင်အချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ပြီးစီးရဲ့ပြီးတာနဲ့သင် program ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့တစ်စကင်ရလဒ်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ပျောက်ဆုံးနှင့်သင့် device ကိုအပေါ်တည်ဆဲနှစ်ဦးစလုံးအဖို့ဒေတာအမျိုးအစားထဲမှာဖော်ပြပါတယ်နေကြသည်။ သင့် iOS device ပေါ်တွင်ဖျက်ပစ်ဒေတာထုတ် filter မှ, သင် "သာလျှင်ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းများကိုပြသရန်" ဟုအဆိုပါ option ကိုပွတ်ဆွဲ ON ဖို့နိုင်ပါတယ်။ လက်ဝဲဘက်၌အဖိုင်အမျိုးအစားကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်, သင်သည်တွေ့ရှိခဲ့ data တွေကို preview နိုင်ပါတယ်။ တဖန်သင်တို့ကိုပြတင်းပေါက်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်အပေါ်တစ်ဦး search box ကိုလည်းမရှိတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သင်က search box ထဲမှာသော့ချက်စာလုံးကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်တိကျတဲ့ဖိုင်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
အဆင့်4သင်ရဲ့ iPhone / iPad ကို / iPod touch ကနေဒေတာများကို Recover
သင်လိုအပ်သည့်ဒေတာများကိုရှာဖွေသည့်အခါရုံသူတို့ကိုရွေးရန်အကွက်များ၏ရှေ့မှောက်၌စစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသားထားတော်မူ၏။ ထို့နောက်ပြီးနောက်, window ၏ညာဘက်အောက်မှာ "Recover" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်, အပြန်လည်ကောင်းမွန် data တွေကိုသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ သငျသညျ Recover နှိပ်လျှင်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ, iMessage, အဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်မှတ်စုသည်, တစ်ဦး Pop-up "ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ Recover" ကိုသင်မေးပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ် "စက်ပစ္စည်းမှ Recover" ။ သင်သည်သင်၏ iOS ကို device ကိုဤမက်ဆေ့ခ်ျကိုပြန်ထားချင်တယ်ဆိုရင်, "စက်ပစ္စည်းမှ Recover" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဆင့် 1 Recovery Mode ကိုရွေးချယ်ပါ
dr.fone စတင်ရန်နှင့် "Data Recovery" tool ကိုမှ "iTunes ကို Backup ဖိုင်ထဲကနေ Recover" ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်ပြီးနောက် iTunes ကို backup လုပ်ထားပြန်လည်နာလန်ထူ tool ကိုဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိသမျှ iTunes ကို backup ဖိုင်တွေ detect မည်ပြတင်းပေါက်၌သူတို့ကိုဖော်ပြရန်။ သင်ကဖန်တီးလိုက်ပါပြီရက်စွဲအရသိရသည်လိုတဦးတည်းဖြစ်သည့်တဦးတည်းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
iTunes ကို Backup ဖိုင်ကနေအဆင့်2Scan ကိုဒေတာများ
သင် "Start ကို Scan ကို" recover နဲ့ click နှိပ်ချင်သောဒေတာများပါရှိသည်သော iTunes ကို backup ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာ iTunes ကို backup ဖိုင်ကိုထဲကဒေတာအားလုံးကိုဖြည်ဖို့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ရှည်ပါ။
အဆင့်3ကို Preview နှင့် iTunes ကို Backup ကိုကိုမှအချက်အလက်များကို Recover
စက္ကန့်အနည်းငယ်ပြီးနောက်, backup ဖိုင်ကိုအားလုံးကိုဒေတာထုတ်ယူမည်ဖြစ်ပြီးအမျိုးအစားထဲမှာဖော်ပြပါတယ်။ သင်သည်ထိုသူတို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမတိုင်မီတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်း preview နိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်သည်ရွေးချယ်အထိမ်းအမှတ်နှင့်အောက်ခြေမှာ button ကို "Recover" ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်သင်အလိုရှိသောသူတို့အားပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။ သင်ပြန်လည်နာလန်ထူဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာ USB ကြိုးမှတဆင့်သင့်ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်သင့် iOS device ကိုစောင့်ရှောက်လျှင်အခုတော့အဆက်အသွယ်များ, မှတ်စုများနဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုတိုက်ရိုက်သင့် iOS device ကိုမှပြန်လည်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
သိကောင်းစရာများ: သင်ရလဒ်ဝင်းဒိုးကိုတစ် Search Box မှာလည်းမရှိတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထိုအရပ်မှ, သင်အဘို့ရှာဖွေဖိုင်တစ်ဖိုင်၏နာမ၌ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
dr.fone ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုအပြေးပြီးနောက်, ဒိုင်ခွက်ပေါ်မှာ "Data Recovery" မှ "iCloud Backup ကိုဖိုင်များအနေဖြင့် Recover" ၏ recovery mode ကိုရွေးပါ။ ထိုအခါသင်သည်အောက်က window ကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ login ရန်သင့် iCloud account မှာနဲ့ password ရိုက်ထည့်ပါ။ dr.fone အလေးအနက်ထားသင့်ရဲ့ privacy ကိုကြာပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင့်ရဲ့ Apple ကအကောင့်အင်ဖိုသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုစံချိန်စောင့်ရှောက်ဘူး။
အဆင့်2ဒေါင်းလုပ် iCloud Backup ဖိုင်
သငျသညျ iCloud သို့ logged သောအခါ, program ကိုသင့်အကောင့်အားလုံးကို iCloud backup ဖိုင်တွေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျဒေတာ recover နှငျ့ "Download" button ကို click ပါမယ်ရှိရာတစျဦးကိုရွေးချယ်ပါ။
ပြီးတော့ pop-up အတွက်သင်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ချင်ပါတယ်ဖိုင်တွေအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဒါက iCloud backup ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်၏အချိန်ကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သငျသညျယခု iCloud အကြောင်းအရာ scan နိုင်ပါတယ်။ ကိုစတင်ရန် "စကင်" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒါဟာသင်အချိန်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်။ ရုံခဏစောင့်ပါ။
အဆင့်3ကို Preview နှင့် iCloud Backup ဖိုင်ထဲကနေဒေတာများကို Recover
အဆိုပါစကင်ကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြည့်စုံရလိမ့်မည်။ ကရပ်ပြီးတာနဲ့သင်ကအဆက်အသွယ်များ, မက်ဆေ့ခ်ျများ, ဓာတ်ပုံများ, နှင့်ပိုပြီးလိုပဲသင့်ရဲ့ iCloud Backup ဖိုင်ထဲမှာအားလုံးနီးပါး data တွေကို preview နိုင်ပါတယ်။ တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းကသူတို့ကို Check နှင့်သင်လိုချင်သောပစ္စည်းကို tick ။ ထိုအခါ "ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ Recover" သို့မဟုတ် click တစ်ချက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ device ကိုပေါ်သူတို့ကိုကယ်ဖို့ခလုတ် "သင်၏ကိရိယာ Recover" ပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ iPhone, iPad နဲ့ iPod touch ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတစ်ဦးကို USB cable ကိုနှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်လျှင်အခုတော့အဆက်အသွယ်များ, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်မှတ်စုများကိုတိုက်ရိုက်သင့် iOS device ကိုမှပြန်လည်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
, Update ကို, Uninstall ကို Install